Agba ahịhịa Acryli
Fine Ihe Agba ahịhịa
Agba ahịhịa mmiri
Kolinsky Ntu ahịhịa
Ihe eji eme nka
Golden Maple Nzukọ Kwa Afọ Gosi!
site ha na 21-05-20
Nanchang Fontainebleau Paiting Materials Industrial Co., Ltd nwere nzukọ kwa afọ na nso nso a. Ọtụtụ ndị na-eto eto na-anọpụ na otu a, anyị kwenyere na Fontainebleau ga-abụ ezigbo nhọrọ ndị mmadụ. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ọ bụla, bịa sonyere anyị!
Artist Agba ahịhịa nwere Njem UK
Golden Maple omenka agba ahịhịa ụlọ ọrụ ama okokụre 10000 tent ahịhịa na katọn ndị a njikere ụgbọ mmiri na UK. Hazie ahịhịa maka ndị ahịa anyị, ọ bụrụ na ị nwere arịrịọ OEM ọ bụla biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Esi zụta ahịhịa mmiri na-acha mmiri mmiri maka ndị mbido?
site ha na 21-01-18
Kedu ka ndị mbido si azụ brushes brushes? Ihe ndị a bụ ụfọdụ akụkụ dị mkpa m chịkọtara mgbe ịzụrụ brushes ndị a. Nke mbụ, ọdịdị nke ahịhịa N'ozuzu, a na-eji brush gburugburu. Ọtụtụ n'ime ha nwere ike ịkekọrịta, yabụ na agaghị m abanye na nkọwa ebe a ....
Kedu otu esi ahọrọ ahịhịa eserese artiest maka ndị mbido?
Typesdị ụdị brushes nke artiest anyị na-ejikarị eserese bụ ndị a: firstdị nke mbụ bụ eriri anụ ahụ, nke bụ bristles. Gụnyere bristles, wolf ntutu, mink ntutu na na. Akụkụ nke abụọ bụ eriri kemịkal. Anyị na-ejikarị naịlọn. Bristles New artiest sere ahịhịa na-zụrụ ime ...
Kedu ka esi amata ọdịiche dị na brushes nke ezigbo na nke adịgboroja?
Usoro mbufepu Wepụ otu bristles site na ahịhịa ma gbaa ya ọkụ. Enwere isi ísì ụtọ n'oge usoro ọkụ, ọ na-aghọ ntụ mgbe ọ kpọchara ọkụ. Nke a bụ ezigbo bristles. Akwụkwọ adịgboroja adịghị atọ ụtọ ma ọ bụ nwee isi plastik mgbe ha na-agba ọkụ. Mgbe ...
Kedu ka esi amata ọdịiche dị n'etiti ahịhịa bristle na nylon brush?
Lee anya na ngalaba obe Ngalaba naịlọn na-egbuke egbuke, mana ahịhịa adịghị. Enwere ike iji anya mara usoro a, mana ogo naịlọn dị nro, akụkụ obe dịkwa obere, yabụ na ọ dị iche na ezì ezi. N'ileghachi anya na ngalaba obe, nke m ...
Adreesị: No.1 Aixihu South Road Qingshanhu District Nanchang City Jiangxi Provience, 330095